ဗုဒ္ဓ ၊ ဗုဒ္ဓ၀ါဒနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပညာရှင်အဆိုအမိန့်များ | မျိုးမြန်မာ
ဗုဒ္ဓ ၊ ဗုဒ္ဓ၀ါဒနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပညာရှင်အဆိုအမိန့်များ
Posted by myomyanmar on June 26, 2014
Posted in: ဘင်္ဂလီအရေး.	Tagged: ဂုဏ်ယူစရာ, ဗုဒ္ဓဘာသာ, ဘာသာခြားတို့အမြင်, Proud.	Leaveacomment
ဤ၌ ဗုဒ္ဓနှင့် ဗုဒ္ဓ၀ါဒအား ထင်မြင်ချက်ပေးကြရာ၌ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားနှင့်စပ်လျှဉ်း၍ လည်းကောင်း ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟောကြားချက် တရားတော်များနှင့်စပ်လျှဉ်း၍ လည်းကောင်း အောက်ပါပညာရှင်များ၏ အဆိုအမိန့်များကိုလည်း သိသင့်သဖြင့် တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
“သူ (ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ)သည် အကြီးမြတ်ဆုံးသောလူသားဖြစ်သည်” ဟုဆိုသည်။
“သီလအားလုံး၏ ပုံစံမှန်များကို သူ(ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ)က ဟောကြားတော်မူခဲ့ပြီး၊ သူ(ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ)၏ ဘ၀တွင်လည်း ၎င်းသီလများအပေါ် အစွန်းအထင်းမရှိ (၎င်းသီလများ မကျိုးမပေါက် မပြောက်မကျား)ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။” ဟု မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါသည်။
“ကျွန်ုပ် သူ(ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ)အကြောင်းကို သိလေလေ ကျွန်ုပ် သူ့(ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ)ကို ပို၍ ကြည်ညိုလေလေ ဖြစ်သည် ” ဟု ပြောခဲ့သည်။
“ဖောက်စ်ဘောက အထက်ပါအတိုင်းပြောလျှင် ဗုဒ္ဓ၏ နောက်လိုက်များ, ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက “ကျွန်ုပ်သူ့အကြောင်းကိုသိလေလေ သူ့ကို ပို၍ကြည်ညိုလေလေ၊ သူ့ကို ပို၍ ကြည်ညိုလေလေ သူ့အကြောင်းကို ပို၍သိလေလေ ” ဟု ဆိုကြမည် ” ဟုရေးခဲ့သည်။
“ဂေါတမဗုဒ္ဓတွင် ကမ္ဘာအရှေ့ဖျားမှ ၂ယောက်မရှိ ပြိုင်ဘက်ကင်းသေ၊ လူ့ဘောင်လောကနှင့် ဆက်စပ်သော ဘ၀နှင့် အတွေးအမြင်များပေါ်တွင် သြဇာသက်ရောက်ရာ၌ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သော(၀ါ)ဘုရားတစ်ဆူဟုခေါ်လောက်သော စိတ်ဓါတ်ရှိတော်မူ၍၊ အခြားသော မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်အောက်မျှ မလျှော့နည်းသော နယ်နဲ့ကျယ်ဝန်းသည် ဘာသာယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုကို စတင် တည်ထောင်သူအနေဖြင့် အားလုံးသောလူအပေါင်း၏ အလေးအမြတ်ပြုခြင်းကို ခံယူရသူ ဖြစ်ပေသည်။ သူသည် ထိုးထွင်းသိမြင်မှု၊ ကိုယ်ကျင့်သီလ ပျိုးထောင်မှုနှင့် ၀ိပဿနာဥာဏ်အမြင်ရှိမှုများဖြင့် ယဉ်ကျေးသော လူအားလုံး၏ အထွေထွေအမွေအနှစ်များကိုပေးဆောင်သော ကမ္ဘာ့အတွေးအခေါ်ရှင်များ သမိုင်းတွင် ပါဝင်သော ပုဂ္ဂိုလ်ထူးလည်းဖြစ်ပါသည်။ သူသည် သမိုင်းတွင် အကြီးမြတ်ဆုံးသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဖြစ်သည်မှာ ယုံမှားဖွယ်မရှိပါ ” ဟု အလွန်ရိုသေစွာဖြင့် ပြောကြားခဲ့သည်။
“ဗုဒ္ဓမြတ်စွာတွင် ယောက်ျားကောင်းပီသခြင်း၊ ရိုးဖြောင့်ခြင်း၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် ပီသခြင်း သဗ္ဗညုတဥာဏ်အလင်းအတွက် ကြိုးစားခြင်း၊ လူသားဆန်သော ထင်ရှားမြင့်မြတ်သည့် စိတ်ဓာတ်ရှိခြင်း။ အတွေးအခေါ်သမားမဟုတ်တဲ့ လက်တွေ့ကိုယ်တိုင် ကျင့်ကြံသူဖြစ်ခြင်းများကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်း အပြင် သူသည်လူသားများအား အထွေထွေစာရိတ္တပြုပြင်ရေး တရားများကိုလည်း ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ခေတ်သစ်၌ အကောင်းဆုံးသော အတွေးအခေါ်စိတ်ကူးများသည် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဘုရား၏ တရားတော်အတွင်း၌ ပါဝင်ညီညွှတ်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အားလုံးသော ဆင်းရဲ့ဒုက္ခများနှင့်ရောင့်ရဲနိုင်မှု မရှိခြင်းများသည် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆံခြင်းကြောင့်၊ သို့မဟုတ် အတ္တစွဲကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားတော်မူသည်။ လူတစ်ယောက်သည် ငြိမ်းအေးမှု(နိဗ္ဗာန်)မရမီ သူသည် အာရုံ၊ ကာမဂုဏ်ခံစားမှု၊ ကိုယ်ကျိုးကြည့်မှု(အတ္တစွဲမှုများ)ကို ဖြတ်တောက်ရမည်။ ထိုအခါ သူသည်ကြီးမားမြင့်မြတ်သော လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်တော့သည်။ ယင်းကဲ့သို့သော လူသားများကို ဗုဒ္ဓမြတ်စွာက အခြားဘာသာရေးများနှင့်မတူသော အားဖြင့် အတ္တစွဲပြုစေရန်၊ သို့မဟုတ် အနတ္တအမြင် ရှိစေရန် ခရစ်တော်မပေါ်မီ နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ ကတည်းကပင် ဦးဆောင်ညွှန်ပြတော်မူခဲ့ပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်တကွ ကျွန်ုပ်တို့၏ လိုအပ်ချက်နှင့် ပို၍နီးစပ်သူလည်း ဖြစ်ပါသည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးချင်းစီ၏ အရေးကြီးသော လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဟောကြားရာတွင် ခရစ်တော်ထက် ပို၍ ရှင်းလင်းသည့်အပြင်၊ မသေနိုင်မှု(အမြဲထာဝရတည်နိုင်မှု) ကို ရှင်းပြရာ၌လည်း ရှုပ်ထွေးမှုမရှိ ” ဟု ရေးသားခဲ့သည်။
“ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်များသည် သဘာဝတရားနှင့်ကိုက်ညီသော တရားတော်များသာဖြစ်သည်။ နောင်တွင် သဘာဝတရားနှင့် ကိုက်ညီသော ဘာသာတစ်ခုသာလျှင် လူလောကတွင် တည်ရှိလာရမည် ” ဟု ရေးသားခဲ့သည်။
တီ အိတ်ချိ ဟတ်စလေက
“ဗုဒ္ဓဘာသာသည် အနောက်တိုင်းသားတို့အမြင်တွင် ပေါ်လွင်နေသော ထာဝရဘုရားသခင်ကို မသိသော လူတွင် အတ္တ(အသက်၊ လိပ်ပြာ၊ ၀ိညာဉ်) ကောင်ရှိသည်ကို ငြင်းဆိုသော ၊ ယင်းအတ္တ(အသက်၊ လိပ်ပြာ၊ ၀ိညာဉ်)ကောင်၏ မပျက်မစီး အမြဲတည်နေသည်ဟူသော ယုံကြည်မှုကိုမိုက်မဲသော ယုံကြည်မှုအဖြစ် ရေတွက်သော၊ ဆုတောင်းမှု၊ ယဇ်ပူဇော်မှုဖြင့် အလိုဆန္ဒပြည့်ဝနိုင်သည်ဟူသော အယူအဆကို ငြင်းပယ်သော၊ လွတ်မြောက်မှုအတွက် မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်လုံ့လစိုက်ထုတ်လျက် ဆောင်မှုမှ တစ်းပါး အခြားဘာကမျှ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသည်ကို လူသားများအား မီးမောင်းထိုးပြသော၊ ပင်ကိုသန့်ရှင်းဖြူစင်မှုဖြင့် အမိန့်တော်ကို နာခံခြင်းဖြစ်သော ကိုးကွယ်မှုမျိုးကို မသိသည့် အပြင် ကယ်တင်ခြင်း အကူအညီကိုလည်း ရှာဖွေမှုမရှိသော ဘာသာရေးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ကမ္ဘာထက်ဝက်သို့လျှင်မြန်စွာ ပျံ့နှံ့သွားပြီး၊ ထိုကမ္ဘာထက်ဝက်၌ ရှိရှင်းကိုးကွယ်မှုများအပေါ် လွှမ်းမိုးကာ တိုင်းသူပြည်သားများ၏ နှစ်နှစ်ကာကာ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။” ဟု ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။
ဒေါက်တာ ဆာ မရီဆင်ဂိုးက
“သိပ္ပံပညာ၏ ချီတက်မှုသည် ဗုဒ္ဓ၀ါဒ၏ အောင်ပွဲရမှုပင်ဖြစ်သည်။ သိပ္ပံပညာ၏ အသစ်တွေ့ရှိချက်များသည် ဗုဒ္ဓ၀ါဒအား အကောင်းဆုံးသက်သေပြချက်များသာဖြစ်၏ ” ဟု ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
Credit : #MYOKYAWTHU (ဟာဂျီနဗီဘိုင်ဆပ်)
Ref : ကမ္ဘာပတ်၍ဘုရားရှာခြင်း
← သိပ္ပံ နှင့် ဖန်ဆင်းရှင် တည်ရှိမှု (ယုတ္တိဗေဒရှုထောင့်)
ကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်စာရင်းဝင် နေရာတစ်ခု ISIS ၏ လက်ထဲရောက်သွား၊ ရုပ်တုများအား ဖျက်ဆီးမည်ကို ပူပန်နေရ →